Isku dhacyo iyo dibadbax khasaaro ka dhashay oo gilgilay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Isku dhacyo iyo dibadbax khasaaro ka dhashay oo gilgilay Muqdisho
Ciidamada amaanka dowladda ayaa rasaasta nool ku riday dadka dibadbaxyada ka dhigaya wadooyinka Muqdisho, ee kasoo horjeeda xukunka Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa sii xoogeysanaya dibadbayada iyo kacdoonka looga soo horjeedo Farmaajo ee ka qarxay maanta magaaladda Muqdisho, kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan.
Degmooyinka ku yaalla waqooyiga Caasimadda ayaa ah meelaha ugu badan ay ka socdaan isku dhacdyada u dhaxeeya Ciidanka iyo dadka careysan, waxaana aad loo adkeeyay amaanka magaaladda, oo wadooyinka lagu soo daadiyay askar badan.
Ma jiro gaadiid shaqeynaya Maanta magaaladda Muqdisho, waxaana xaaladda jirta laga cabsi qabaa inay dagaal isku bedesho, maadaama kacdoonka shacabka uu sii xoogeysanayo, islamarkaana uusan Maamulka Farmaajo muujinaynin damqasho iyo naxariis toona.
Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa wata boorar ay ku qoran yihiin hal-ku-dhigyo ay kamid yihiin dooni meyno doorasho lagu shubto oo sababta barakac, waxaana lagu arkayaa jidadka Ciidan iyo gaadiidka dagaalka.